Masevhisi - Motio
musha 9 Services
Isu Tine hunyanzvi Mukubatsira maAnalytics Matimu Kuwana Zvakawanda Kubva Puratifomu Yavo
Professional Services kusangana kubva kune nyanzvi vanoita hunyanzvi mukuita yakaoma analytics mabasa nyore. Tine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko tichishanda nevatengi kugadzirisa uye kuzadza masipika mumapuratifomu e analytics. Kana iwe uchinetseka nekudzokorora mabasa, kukwidziridzwa, kutama, kana kutumirwa, ngatibatsire iwe kuti uendese kune yako yaunoda nyika nekukurumidza kupfuura iwe zvawaifunga kuita, uye mukati mebhajeti.
Simudzira Yako BI Platform
Isu tinokubatsira iwe kugadzira chirongwa uye kugadzira chirongwa. Panguva yekuurayiwa isu tinogona kuisa iyo nyowani vhezheni, kuchenesa iyo yekare system, kufambisa zvemukati, kuyedza, kusimbisa, uye kutsigira kuenda-kurarama. Tichishandisa yedu software tekinoroji, isu tinokwanisa kudzikisa mutengo uye nguva kusvika 50% zvichienzaniswa nemaitiro ebhuku.
Kana masangano akachinja vanopa kuchengetedzeka zvinogona kukonzera nyaya hombe mupuratifomu yeBI uye kupaza madhirhibhodhi, mashedhiyo, mareport, uye chengetedzo-nhanho. Motio yakavaka zvishandiso zvekubatsira kutama pakati pevanochengetedza, kubvisa yakawanda yekuedza kwemawoko uye kudzikisira nguva yekuzorora.
Kuteedzera Performance Management
Nyaya dzekuita dzinogona kusimuka uye pamusoro kuburikidza neBI system yako. Motio inopa masevhisi ekuongorora uye kuona kwazvinobva nekudzikisira kwekuita muBI yako nekuvakwa kwakakomberedza. Tinogona kuita cheki chehutano, kugadzirisa iyo system, kupa mazano, uye kuongorora kugadzirisa mukati meiyo BI chikuva.
Maitiro Ekuita Dhata Yemhando Simbiso
Mazuva ano mapaipi edhata ane zvipingamupinyi zvine chekuita nekusakwana kwekupinda kwedhata, iro rakazara vhoriyamu re data, uye nekumhanya kwekufamba kwedata, izvo zvinogona kukonzeresa nyaya dzinoonekwa muzvishandiso zve analytics. Paunenge uchishandisa kuverenga kwakaomarara mumadhata kana madhibhodhi, data risiri iro rinogona kukonzeresa kumasero asina chinhu, zero-values ​​dzisingatarisirwi, kana kuverenga zvisiri izvo. Motio inobatsira iwe kuenda kumberi kwekakona uye kukuzivisa iwe nezve chero dhata nyaya pamberi pekuti ruzivo rwununzwe kune vekupedzisira-vashandisi nekushandisa edu otomatiki ekuyedza mhinduro.
Svika ku Motio Nyanzvi